ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစာရေးဆရာများမှကြီးစွာသောဆောင်းပါးတွေကိုလက်ခံ, ဘလော့ဂါများနှင့်အလွတ်တန်းစာရေးဆရာများ. ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာတွေ၏စိတ်ကူးတစ်ခုများအတွက်, ထို site ပေါ်တွင်ဆောင်းပါးအချို့မှတဆင့်ဖတ်ပါ. ဒီစသင်တို့သည်ငါတို့၏လေသံ၏စိတ်ကူးတစ်ခုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိသတ်ကိုကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါပြီဆောင်းပါးတွေအမျိုးအစားကိုပေးတော်မူမည်.
ငါတို့သည်သင်တို့၏ပထမဦးဆုံးဆောင်းပါးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဖို့သဘောတူမယ်ဆိုရင်, ငွေပေးချေမှုဆောင်းပါးတခုစီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိနှုန်းထားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်သည်ရှေ့တော်၌အထို့နောက်သဘောတူညီချက်၏စာတစ်စောင်လက်မှတ်ရေးထိုးကြလိမ့်မည်. ဒီနောက်ဆက်တွဲတင်သွင်းပုံနှိပ်ထုတ်ဝေကြလိမ့်မည်ဟူသောသဘောတူညီချက်တစ်ရပ်ကိုလိမ့်မည်မဟုတ်. ထုတ်ဝေရန်အားလုံးနောက်ဆက်တွဲတင်သွင်းတစ်ခုချင်းစီဆောင်းပါး၏အရည်အချင်းကိုနှင့်လျော်တဲ့အပေါ်အခြေခံပြီးလိမ့်မည်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ်မှတ်ပရိသတ်ကအမေရိကန်ကျော် 18 တစ်ခုတည်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူ.
အသေးအဖွဲချွင်းချက်နှင့်အတူ, ဆောင်းပါးတွေကိုအကြားဖြစ်သင့် 600-1000 စကားများ.
ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပြီအကြောင်းအရာရဲ့ခေါင်းစဉ်များခိုင်မာ adjective နာမဝိသေသနများမှာ, နံပါတ်များ (ဥပမာစာရင်းများ) နှင့်မေးခွန်းများ.
စာရေးဆရာများကတစ္ဆေစာရေးဆရာတွေဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြောက်စေခြင်းသို့မဟုတ်မိမိတို့၏ပရိုဖိုင်း site ပေါ်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့ကြ.
datemypet.com ကို AT တင်သွင်းခဲ့တဲ့
မှတ်ချက်: အေဂျင်စီကသို့မဟုတ်စီးပွားရေးမှတင်သွင်းတစ်ဦးမဟုတ်သော်ငွေအပေါ် အခြေခံ. စဉ်းစားပါလိမ့်မည်